အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား - Are We Ready? | mmshare
အမိမြန်မာပြည်ရဲ့ ပြောင်းလဲ တိုးတက်စပြုနေတဲ့ အခြေအနေတွေကို အားရဝမ်းသာ စောင့်ကြည့်နေရင်း နေ့တိုင်းနီးပါး စဉ်းစားမိနေတဲ့ နောက်တစ်ချက်ကတော့ "ငါတို့ ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတွေ ဝင်လာတဲ့အခါ၊ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းပြီး အဂတိလိုက်စားမှုကင်းတဲ့ စီးပွားရေး စနစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ။ မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်ရင် ငါတို့ ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ။ ပိုက်ဆံရှာမှာလား။ တိုင်းပြည်ပြန်လည် တည်ထောင်တဲ့ နေရာမှာ တတ်နိုင်သလောက် ပါမှာလား။ မေးခွန်းတွေ အများကြီး မေးနေမိပါတယ်။
လူငယ်တွေ အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား
ပြည်ပက ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတွေ ဝင်ရောက်လာတဲ့ အခါ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် စီးပွားရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းသစ်တွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေဘက်က အဆင်သင့်ရော ဖြစ်နေရဲ့လားလို့ တွေးမိပါတယ်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကွာခြားချက်၊ ဘာသာစကား ကွာဟချက်၊ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ ကွာဟချက်တွေ အတွက် ကျွန်တော်တို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား။ အဆင်သင့် ဖြစ်နေရင်တော့ ပြဿနာ မရှိပေမယ့်၊ လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ ပညာရှင် အင်အား အဆင်သင့် မရှိခဲ့ရင်၊ ဒါမှမဟုတ် အချိန်မှီ ဖြည့်တင်းနိုင်စွမ်း မရှိခဲ့ရင်၊ ပြည်ပက ဝင်လာတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ ပညာရှင်တွေက အလုပ်နေရာကောင်းတွေကို အပေါ်စီးက ဝင်ယူသွားမှာ သေချာနေပါတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့လည်း နိုင်ငံခြားက လာလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ ဒေသခံဝန်ထမ်းဦးရေ ရာခိုင်နှုံး ဘယ်လောက် ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ အကာအကွယ်မျိုးတွေကို ထည့်ပေးထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ စင်္ကာပူအစိုးရရဲ့ ပြည်ပအလုပ်သမားတွေကို ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းအချို့ကို အတုယူကောင်း ယူဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေကို သုံးလို့ရတဲ့ အလုပ်အကိုင်အားလုံးမှာ မြန်မာလူမျိုးတွေပဲ အလုပ်လုပ်ခွင့် ရနေတာမျိုးကိုပဲ မြင်ချင်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေကိုပဲ လိုအပ်သလို နည်းပညာလွှဲပြောင်း ပို့ချပြီး လက်တွဲ အလုပ်လုပ်သွားတဲ့ ပြည်ပရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတွေကိုပဲ ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲကို ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံး ဝင်လာပြီး ထင်ရာလုပ်မယ့် သူတွေကိုတော့ မလိုချင်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား
တိုင်းပြည်က သယံဇာတအားဖြင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝပေမယ့် လူဉီးရေ သန်းခြောက်ဆယ်ကျော်မှာ ဆင်းရဲတဲ့သူ ၅၉ သန်းကျော်လောက်ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်အတွက် တစ်ကယ်လိုအပ်နေတာက ဟန်ချက်ညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပါ။ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ လူနေမှု အဆင့်အတန်းတွေ ဟန်ချက်ညီညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေရဲ့ အင်အားနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေဟာ အရေးကြီးတဲ့ အင်အားတစ်ခု ဖြစ်လာမှာ သေချာနေပါတယ်။
တိုးတက်လာတဲ့ အခြေအနေကောင်းတွေ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားပြီလဲ။ အခွင့်အလမ်းသစ်တွေကို ဖမ်းဆုပ်ဖို့အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြပြီလား။ ပြည်ပမှာ ရောက်ရှိ အခြေကျနေတဲ့ လူငယ်တွေရော ပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ အတွက် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားပြီလဲ။ အိမ်ပြန်ပြီး တိုင်းပြည်တည်ထောင်ရာမှာ တတ်စွမ်းသလောက် ပါကြမှာလား။ လက်ရှိ အခြေကျနေတဲ့ ပြည်ပက လုပ်ငန်းတွေမှာပဲ ငြိမ့်နေ၊ နှပ်နေကြမှာလား။ ကျွန်တော်တို့ ဆက်ပြီး ငြင်းခုန်နေ၊ အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်နေကြဦးမှာလား။
အဖြေအတိအကျ မထွက်နိုင်သေးတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့အတူ၊ စိုးရိမ် အားငယ်မှုတွေနဲ့အတူ၊ ရွှင်လန်းတက်ကြွမှုတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော် အိမ်ပြန်ဖို့ အိပ်မက်တွေ နေ့တိုင်းမက်နေမိပါတယ်။
linthein (not verified)
Mon, 03/26/2012 - 03:18
Foreign Investment Rules is
Foreign Investment Rules is in draft state.
Mon, 03/26/2012 - 13:11
Laws need to protect natural resources & citizens
I'm not sure about the coming investment laws.
Foreign investment laws should have attraction to foreign companies as well as protection to natural resources and native citizens.
And these laws also should be flexible to change, modified based on time & conditions.